SAWIRRO: Beyle oo soo bandhigay dalalka daymaha ugu badan ku leh Somaliya | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta SAWIRRO: Beyle oo soo bandhigay dalalka daymaha ugu badan ku leh Somaliya
SAWIRRO: Beyle oo soo bandhigay dalalka daymaha ugu badan ku leh Somaliya
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, Wasiirka Maaliyadda Somaliya ayaa maanta shir jaraa’id uu ku qabtay Magaalada Muqdisho kaga hadlay daymaha Somaliya lagu leeyahay iyo kobaca dhaqaalaha dalka.
Wasiirka oo shirkiisaan jaraa’id ku dheeraaday ayaa soo hadalqaaday wadamada daymaha ugu badan ku leh Somaliya, iyadoo dalalka kaalmaha hore kaga jirana ay kala yihiin Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga iyo Faransiiska.
“Wadamada markaad u gasho wadanka lacagta ugu badan inagu leh waa Mareykanka, hal bilyan buu inagu leeyahay, waxaa ku xigga Ruushka illaa toddobo boqol oo milyan oo dhow dhow ayuu nagu leeyahay, Talyaanigaa ku xigga lix boqol leh, Faransiiskaa ku xigga oo afar boqol leh.” Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Somaliya.
Wasiirka ayaa wuxuu sheegay in dalalka kale ee daymaha ku leh Somaliya oo leesku yiraahdo (Paris Club) ay gooni u shireen, isla-markaana ay isu raaceen in daymaha laga daayo dalka Somaliya.
Wasiirka ayaa tilmaamay booqashadii uu toddobaadkii hore Magaalada Muqdisho ku yimid Madaxweyne Kuxigeenka Baanka Adduunka ay muujinayso sida Somaliya ay uga soo baxday heshiisyadii ay la gashay caalamka, ee la xiriiray barnaamijkeeda dayn cafinta.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in Hafez Ghanem, Madaxweyne Kuxigeenka Baanka Adduunka uu Madaxda Qaranka u sheegay in Somaliya ay u hayaan dhawr lacagood oo kala duwan, oo uu cadadkeeda ku sheegay qiyaastii toddobo boqol oo milyan oo dollar.
Wasiirka oo iftiimiyay in dhaqaalaha dalka uu soo koraayo ayaa dhanka kale sheegay sababta loo kordhiyay Miisaaniyadda Qaranka inay kow ka tahay, iyadoo la kordhiyay mushaaraadka Ciidamada Qalabka Sida.
Askari kasta oo markii hore la siin jiray boqol iyo soddon dollar ayaa hadda loogu daray mushaarkiisa toddobaatan dollar.